जागरण अभियानः कांग्रेसमा नवजीवनको रक्तसंचारको प्रयास - हिमाल दैनिक
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १३:४७
नेपाली कांग्रेस देशको एउटा पुरानो ऐतिहासिक पार्टी हो। २०७४ को आम चुनावमा कांग्रेस पराजित भयो। एउटा चुनावमा पराजित हुँदैमा कांग्रेस हतास हुने कुरै थिएन। तरपनि किन हो कुन्नी कांग्रेसको पंक्तिमा एकप्रकारको निरासा र हतासा देखियो।
तर, अहिले आएर सुस्तरी र क्रमिकरुपले त्यो हतासा र निराशा निर्मूल हुँदै गएको छ। हालै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले राष्ट्रिय जागरणको अभियान ल्याएर कांग्रेसमा नवजीवनको रक्तसंचार गर्ने प्रयास गरेको छ। यस प्रयासका निमित्त कांग्रेस अभियन्तालाई धन्यवाद दिनै पर्दछ।
दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावमा जुन आशा र भरोसाको सपना जनतामा बाँडेको थियो त्यो आशा र भरोसामा त्यसले तुषारापात गर्दैछ। यसमा नेकपाको नेतृत्व नराम्ररी नांगिएको छ।
एकातिर उनीहरुले आफूले जमानादेखि बोक्दै आएको कम्युनिष्ट सिद्धान्तका सूत्रहरु छोडेको दाबी गरेकाछन्। अर्कोतिर, छोडिएका सिद्धान्त र सूत्रका ठाउँमा के कस्तो प्रस्ताव उनीहरुसँग छ भन्नेबारे एकशब्द पनि बोल्न सकिरहेका छैनन्।
फलस्वरुप कम्युनिष्ट आन्दोलनका निमित्ति उनीहरुको वर्तमान नेतृत्व निभ्नेबेलाको बत्ति सरह देखिएको छ। अहिले झुलुक्क झुल्किएको छ तर, त्यसको भविश्य छैन।
विक्रम सम्वत् २०४६ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुदलीय व्यवस्था फर्कियो। कांग्रेसका निमित्त त्यो ठूलो अवसर र मौका थियो। कांग्रेससँग प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा गहन र महान परम्परासँगै स्पष्ट सिद्धान्त थियो।
त्यहि समयमा सोभियन युनियन विघटन भयो। तर, त्यसको कुनै पनि प्रकारको छोइछिटो कांग्रेसलाई लाग्ने कुरै थिएन। कांग्रेस सधैँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने पार्टी थियो। सोभियत युनियन एकदलीय व्यवस्थामा चल्दा र अधिनायकवादको अभ्यास गर्दैगर्दा कांग्रेसले भन्ने गर्दथ्यो, प्रजातन्त्र नभएको समाजवाद चल्दैन।
सोभियत युनियनको विघटन एकप्रकारले कांग्रेसले झण्डै सात दशक पहिलेदेखि दिँदै आएको चेतावनीको प्रमाणिकरण थियो। यसबाट कांग्रेसले नयाँ आत्मविश्वास लिनु पर्ने थियो।
कांग्रेस सिंगो दक्षिण एशियामा अझ भनौँ तेस्रो विश्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षमा लगातार लडिरहेको एकमात्र पार्टी थियो। यस पार्टीका नेताहरुको त्याग, तपस्या, बलिदान र योग्यता समेतको चर्चा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको थियो।
त्यति हुँदाहुँदै पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नबहालीको भोलिपल्ट कांग्रेस सामाजिक, आर्थिक न्यायको प्रश्नमा चुकेकै हो। कांग्रेसको त्यसकिसिमको चुकाइका लागि यसको नेतृत्वलाई पूरै दोष दिन त मिल्दैन तर, उनीहरुले पार्टीभित्रका आला÷काँचा केटालाई उनीहरुको तथाकथित डिग्रीका आधारमा ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिए।
नेपालको अर्थ नीति निरन्तर जनताबाट टाढिँदै गयो। आज पनि जनतालाई हामीले विभिन्न कलकारखाना, उद्योगधन्दा निजीकरणकाबारेमा चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यतिबेला कांग्रेसका निमित्त त्यो निजीकरण बाध्यता पनि थियो होला। कांग्रेसको सट्टा कुनै कम्युनिष्ट पार्टी नै सत्तामा आएको भएपनि त्यो निजीकरणको आँधीबाट विमुख हुन सक्दैनथ्यो होला। त्यतिबेलाको विश्वपरिवेश नै त्यस्तै थियो।
सोभियत युनियनको विघटनले विश्वमा भुमण्डलीकरणको आक्रामक प्रभाव परेको थियो। तरपनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बी.पी.द्धारा प्रशिक्षित थिए। बी.पी.ले सिंगो जीवनभर सामाजिक न्यायको वकालत गर्नु भयो।
बी.पी.ले एकातिर साम्यवादलाई चुनौति दिदैँ भन्नु भयो, प्रजातन्त्रवीना तिम्रो साम्यवाद असफल हुन्छ, अर्कोतिर, एकाङ्गी प्रजातन्त्रवादीलाई पनि भन्नु भएको थियो, सामाजिक न्यायको लडाई लड्न सकेनौँ भने प्रजातन्त्र पनि खोक्रो हुन्छ।
त्यसैले बी.पी.को सिद्धान्तको नाम थियोः प्रजातान्त्रिक समाजवाद। तर, भुमण्डलीकरण, बजारबादको अन्धवेगमा नेपाली कांग्रेसले सामाजिक न्यायका पक्षमा ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेन।
अहिले नेपालमा बृद्धभत्ताको बहुत चर्चा छ। त्यति सानो एउटा सुधारवादी कदमका लागि अहिले पनि नेपालका कम्युनिष्टहरु उक्त निर्णयप्रति गर्भ गर्दछन्। तर, कांग्रेसको तीन वर्षको कार्यकालमा त्यतिबेलाको नेतृत्वले एउटा पनि जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सकेन। त्यसका निमित्त तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकारहरुलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु पर्दछ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले अर्थशास्त्रको जञ्जाल छिचोल्न सक्नु भएन भनि स्वभाविक रुपमा बुझ्न सकिने कुरा हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला एक नम्बरका नामुद कुशल संगठक हुनुहुन्थ्यो तर, सिद्धान्तमा श्रेष्ठता कहिल्यै पनि थिएन र उहाँले त्यसको दाबा पनि गर्नु भएन।
आज नेपाली कांग्रेसले नवजीवन चाहिरहेको छ। कांग्रेसको नवजीवनका सम्भावना कसरी छन् त? मलिलो माटोमा एकझर पानी पर्नेवित्तिकै बाली हरियो भएर आउँछ। नेपाली कांग्रेसको माटो मात्र मलिलो छैन, यसभित्र विद्यमान रहेको अन्तरमन र बीउ, विरुवा पनि अत्यन्त ओजस्वी छन्।
झण्डै पचास वर्षको राजनीतिक संघर्षपछि जीवनका अत्तरार्धमा पुगेर बी.पी. कोइरालाले एशियालाई सुहाउने समाजवादको सिद्धान्त अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यहिबेला बी.पी.ले भन्नु भएको थियो, योजना आयोगको कार्यालयमा हलो जोतिरहेको किसानको तस्विर राख।
त्यतिबेला नै बी.पी.ले भन्नु भएको थियो, म प्रत्येक नेपालीको घरमा एक हल गोरु र दुहुनो गाई र शिक्षाको जागृति पुर्याउन चाहन्छु। स्मरणिय छ, कुनै समय भारतका महात्म गान्धीले घरघरमा चर्खा चलाउ, बेकार नबस भन्नु भएको थियो। बी.पी. कोइराला पनि त्यहि पदचिन्हमा हिँड्दै केही नभए पनि नेपालीहरु गाई पालेर बसुन् भन्ने थियो।
बी.पी. र गान्धीको कथन अक्षरस चर्खा नै चलाउ भनेको मात्र होइन। एउटा गाई नै पाल अर्को बाटो छैन भन्न खोजेका पनि होइनन्। विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावबाट अलग्गिएर गाई नै पाल्नु पर्छ भन्ने अवस्था आज छैन। यसमाथि युवशक्ति सम्पूर्ण रुपले विदेशमा छरिएर रहेको छ। यसैले बी.पी.ले फलानो कुरा भन्नु भएको थियो त्यसैले यहि गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन।
तर, बी.पी.ले योजना आयोगको कार्यालयको भित्तामा किसानको फोटो किन भनेका थिए? त्यो अहिले पनि प्रासांगिक छ। मानिस खाली हात नबसुन्, खाली दिमाग शैतानका घर भन्छन्। बी.पी.को अर्को मर्म त्यो थियो।
आज नेपालमा झण्डै ७० प्रतिशत हाराहारीको जनसंख्याले कृषिलाई आफ्नो जीवनको प्रमुख स्रोत बनाएका छन्। तर, नेपालको राष्ट्रिय आयमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशतमात्रै योगदान कृषिक्षेत्रको रहेको छ। जुन योगदान छ त्यो पनि बडो विपरित परिस्थितिको योगदान छ।
अत्यन्त उर्वर माटो छ, तर त्यहाँ सिंचाई छैन। हाम्रो कृषि अहिले पनि वर्षातको पानीमा निर्भर छ। नदी नालाका पानी यसै बगेर गइरहेको छ। दुई चारवटा परियोजना भारतले बनाइदिएको छ तर, त्यी परियोजनाबाट पनि भारत आफूँले ज्यादा लाभ लिने जमर्को गरेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपालका किसानले आफ्नो पौरख र योगदान देखाउन सकिरहेका छैनन्। नेपाली किसानसँग श्रम गर्ने उत्साह र जाँगर छ। बाली संरक्षणका लागि चाहिने बुद्धि पनि छ तथापि उनीहरुको परिश्रम र बुद्धिले यथावश्यक संरक्षण र प्रोत्साहन पाउन सकिरहेको छैन।
यसको संरक्षणको लागि किसानलाई राज्यले अनुदान दिनु पर्दछ भनि कांग्रेसले धेरै पहिले दृढतापूर्वक अगाडि आउनु पर्दथ्यो। हामीले त्यसका लागि बाञ्छित कदम लिन सकेनौँ। तर, अनुदान दिएर मात्रै पनि हुँदैन। अनुदान बाहेक हाम्रा परम्परागत कला, कौशल र शिपलाई अझ उझाउने र तिखार्ने काम गर्नु पर्दथ्यो।
हामीले यसको जगेर्ना गर्नेतर्फ भन्दा ज्यादा ध्यान विदेशीको लहलहैमा लागेर विदेशी सल्लाहकारलाई लिएर, विदेशी साँढे मगाएर नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भनेर त्यतिबेलाको कांग्रेस र यसको सरकारमा भएकाहरु लाग्न पुगे।
यता बीचमा आएर नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनका लागि ऐतिहासिक योगदान गर्यो। प्रजातन्त्रप्रतिको कांग्रेसको निष्ठाले गर्दा त्यस योगदानको माध्यमबाट कांग्रेसले नवजीवन प्राप्त गर्यो।
कांग्रेस फेरि सत्तामा पुग्यो तर, यसपटक भने जुन रफ्तार र गतिले हामीले लोकान्मुख काम गर्नु पर्दथ्यो त्यो गर्न सकेनौँ।
बी.पी.ले अरुकुरा केही नभनेर गाई नै किन भन्नु परेको थियो? त्यसको मर्ममा हामी कहिल्यै पनि जान सकेनौँ अथवा चाहेनौँ। अहिले पनि केही बिग्रीएको छैन। भन्ने गरिन्छ, घोडा चढ्ने व्यक्ति मात्रै घोडाबाट लढ्दछ। चुनावमा भएको हारमा हामीले पटक्कै विस्मात गर्नु पर्ने थिएन र छैन पनि।
चुनावको आफ्नै गणित हुन्छ। कुनै समयमा मात्र दुई सिट ल्याएका भारतीय जनता पार्टीका नेता अटविहारी बाजपयी चारवर्षपछि एक सयभन्दा बढि सिट जित्न सफल भएका थिए। कुनै समय तीन चौथाई बहुमत पाएका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राजीव गान्धी आश्चर्यजनक ढंगले पराजित हुन पुगेका थिए।
तर, आज पनि हाम्रो जनमत र समर्थन उत्तिकै छ। आवश्यकता के छ भने, हाम्रो कार्यकर्ताहरुलाई हामीले भविश्यको नयाँ सपना र कल्पना दिन सक्नु परेको छ। हामीसँग नयाँ नेपालको सपना के छ, नयाँ नेपालको कल्पना के छ?
कम्युनिष्टहरु पुरानै बाटोमा हिँडिरहेका छन्। एकातिर उनीहरुमा अहिले पनि तानाशाहीको धङधङी कायमै छ, अर्कोतिर उनीहरु नेपाललाई ठूलो औद्योगिकरण गरेर आधुनिक र विकसित बनाउने भन्छन्। तर, उदाहरण खोज्दा भने उनीहरु भियतनाम र कम्बोडियालाई लिन्छन्। भियतनाम र कम्बोडियाको मोडलमा चलेर नेपालको उन्नती हुन सक्दैन।
नेपाललाई एउटा सादगी, स्वच्छता र समानतामा आधारित विकासे मोडल चाहिएको छ। यो मोडेलको राम्रो नमूना कुनै समय बी.पी. कोइरालाले दिनु भएको थियो। बी.पी. कोइरालाले दिनु भएको त्यो मोडललाई झन परिष्कृत र परिमार्जित गरेर जनताका अगाडि हामीले पस्किनु कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको आजको प्रमुख कर्तव्य हो।
कांग्रेस जतिसुकै गम्भिर र कमजोर अवस्थामा भएपनि कांग्रेसको आज विकल्प अरु छैन। विगत डेढ दुई वर्षयताको क्रियाकलापले झन यो कुरा स्पष्ट भएको छ कि नेपालमा प्रजातन्त्र जोगाउन कांग्रेसले मात्रै सक्दछ। सामाजिक न्याय पनि आजको परिस्थितिमा कांग्रेसले मात्रै दिन सक्दछ।
त्यसका लागि कांग्रेस एकपटक आफ्नो जरामा जान सक्नु पर्दछ। बी.पी. कोइराला, सुवर्णशम्शेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखाएको बाटोलाई कांग्रेसजनले हृदंगम गर्न सक्नु पर्दछ।
बी.पी. कोइरालाको समाजवादी शिक्षा÷दिक्षा हिन्दुस्तानमा भएको थियो। त्यतिबेला भारतका प्रखर समाजवादी लेखक÷विद्धान नेता जयप्रकाश, राममनोहर लोहिया लगायतसँग उहाँको अन्तरंगको सम्बन्ध थियो। त्यतिबेला उनीहरुले वैकल्पिक समाजवादको कुरा अघि सारेका थिए। बी.पी. त्यसबाट प्रभावित हुनु हुन्थ्यो। कम्युनिष्टहरुले माक्र्स, लेनिन, स्टालिन र माओ भनेजस्तै हामीले पनि आज आएर बी.पी., जयप्रकाश, लोहिया, गान्धीको परम्परालाई वैचारिक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ।
राजनीतिक लडाई विचारका सहायताले लडिन्छ। यो कुनै गुरिल्ला युद्ध होइन जहाँ अध्याँरोमा लुकेर बन्दुक हाने जस्तो गरेर हुँदैन। त्यो गुरिल्ला युद्ध हुन जान्छ। हामीले राजनीतिको आमने सामनेको लडाई लड्नु छ। जहाँ विचार, तर्क र विवेकका आधारमा अगाडि बड्नु पर्छ।
प्रजातान्त्रिक मानिसका निमित्त तर्क र विवेक नै उसको राजनीतिक हतियार हो। कम्युनिष्टहरुका निमित्त हतियार नै उनीहरुको तर्क, विवेकको राजनीति हो।
प्रदिप गिरिका थप लेख रचना पढ्न तलका लिंक क्लीक गर्नुहाेस्
Prevपछिल्लोत्रिशूलीमा यात्रुबस खस्यो, पाँचको मृत्यु, २९ घाइते
अघिल्लोअसारदेखि मोटरसाइकलपछि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्यNext